တစ်ခုသော မနက်ခင်းမှာ ဗိုက်ဆာဆာရှိတာနဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် ကော်ဖီလည်းရ လတ်ဆတ်တဲ့ Donut မုန့်တွေ လည်းစားနိုင်တဲ့ မြို့ပြင် ဗျူးပွိုင့်နားက ဖူဂျီကဖီးဆိုင်ကို ကား မောင်းထွက်ခဲ့သပေါ့။ ကိုယ့်အိမ်နားမှာလည်း ရှိပေမဲ့ ကျွန်တော့် လျှာက အဲဒီဆိုင်ကဟာတွေ ကိုပဲ အရသာတွေ့နေတာကြောင့် ပါ။ လူတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အစားအသောက်လေးတွေရှိ တတ်တယ်။ ခေါက်ဆွဲချင်းတူရင်တောင် ကိုယ့်လျှာနဲ့တွေ့တဲ့ ဆိုင်က ခေါက်ဆွဲကိုပိုပြီးတမ်းတတတ်ကြတာ လူ့စိတ်ပဲထင် ပါရဲ့။
ကားကိုမောင်းထွက်လာလိုက်တာ မြို့ပြင်ရောက်ခါနီးတော့ စိမ်းစိုတဲ့သစ်ပင်တွေ ၀ါးပင်နွဲ့နွဲ့တွေကိုဖြတ်သန်းလာအပြီးမှာ တော့ ဂျပန် စတိုင်တည်ဆောင်ထားတဲ့အဆောက်အဦးလေး တွေနဲ့ ဖူဂျီကော်ဖီဆိုင်ကို မြင်လိုက်ရပါပြီ။ ဆိုင်ဝန်းကျင်မှာ မနက်စာစားသောက်သူ အချို့ရှိနေပေမဲ့ ဆိုင်အပြင်ဘက် ကျောက်ဆောင်ပေါ်က စားပွဲခုံမှာထိုင်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင် လေးနှစ်ယောက်ကို သတိထားမိလိုက် တယ်။ သူတို့စကားတွေ ပြောလိုက်ကြ၊ ရယ်မောလိုက်ကြ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တို့ထိလိုက်ကြတာ မကြာခဏ။ အတွေ့အကြုံအရကြောင့်လား ကိုယ်ကပဲ ယောက်ျားချင်းစိတ်ဝင်စားနေသူမို့လားမသိ ဒီကောင် လေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရတာ သာမန် ထက်တော့ပိုတယ်ဆို တာ အတတ်ပြောနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သူ တို့ဝိုင်းနားကဖြတ်သွားတော့ အသက်နည်းနည်း ပိုငယ်မယ့် တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဘော်ဒီ ပြီးတော့ အထက်အောက် ဒီဇိုင်းတွေပေါ် မျက်စိရွှေ့တယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေက ထုံးစံအတိုင်းကွေးညွတ်သွားရင်း ပါးပြင်မှပါးချိုင့်လေးတွေပေါ် သွားအောင် ပြုံးပြလိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကို မသိမသာ တွန့်ပြရင်းပေါ့။ ဆိုင်အတွင်းဘက်ကို ဦးတည်လိုက် ရင်း မုန့်ရယ် ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ် အိမ်အပြန်ယူသွားဖို့ ဆူရှီ တစ်ပွဲကို အော်ဒါမှာဖြစ် ပါတယ်။ သဘာဝလေ တဟူးဟူးတိုက် နေသလို နေရောင်ခြည်ကလည်းဖြာနေတဲ့အပြင် လတ်ဆတ်တဲ့ ပန်းနံ့တွေသင်းနေပုံက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်က စွမ်းအင်တွေ ကို မဆုံးရှုံးအောင်ပြုလုပ်ထားသလိုပင်။ သဘောကျလိုက်တာ ကျွန်တော့်အိမ်ကိုလည်း ဒီပုံစံအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားပြီးဆောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလက်ရှိအိမ်ကတော့ မေမေတို့လက်ထက် ကဆောက်ထားတော့ သဘာဝကျွန်းသစ်တွေကို အစွမ်းကုန် အသုံးပြုထားသလို အခန်းခန်းအဆောင်အဆောင်နဲ့ဆိုတော့ ကိုလိုနီခေတ်ထဲပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရစေသပေါ့။ မှန်ချပ်တွေကတစ်ဆင့် ချာတိတ်တွေကို ရှိုးလိုက်တော့ သူတို့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော်ရှိရာဆီကြည့်ရင်း ဘာတွေသဘော ကျသွား လည်းမသိ စကားပြောရင်း ရယ်မောစပြုလာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးမိတာကတော့ သက်တမ်းရင့် မာစီဒီး ကားလိုပဲ ခန့်ထည်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ သဘောကျဖွယ်အပြုံး ပိုင်ရှင်လို့လေ။ ကျွန်တော့်အသက်က သုံးဆယ်ကျော် ဒီတောင် ပေါ်စခန်းမြို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက အိုင်စီတီမြို့တော်စီမံကိန်း အတွက် အလုပ်လုပ်နေသူ တစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပုံစံက ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ တုန်းကနဲ့ မတူခြားနားနေပြီ။ ခါးနံပါတ်က ၃၅ ကနေ ၃၂ဖြစ် ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းအပြင် ကျွန်တော့်ဝမ်းပြင်သားတွေ တစ်နည်း အားဖြင့် Abs တွေကိုလှေကားထစ်တွေလို အထစ်အထစ် ဖြစ် အောင် ကြိုးစားနေတယ်။ ကံတစ်ခုကောင်းတာက ကျွန်တော့် ရင်အုပ်က ၄၂ရှိတုန်းပဲ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းပြားသွားသယောင် ဖြစ်နေ တယ်။ လက်မောင်းတွေကတော့ ကြွားကြွားရွားရွား ရှိတုန်း။ မာဆယ်တွေ အမြှောင်းမြှောင်းနဲ့ ငနဲတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ Beach Body ပိုင်ရှင် ထဲမှာ အလှဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရမြင် ရလိုက်ရင် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သူတစ် ယောက်အဖြစ် ထင်သာမြင် သာရှိပါတယ်။
အို....အဲဒါကိုပဲ..Body Show ပြရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ် နှစ်သက်တယ်။ အခုလည်း ချည်သားဘောင်းဘီရှည်ပျော့ပျော့ ရယ် အပေါ် က အားကစား ဂျာစီတစ်ထည်ရယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ လူတွေရဲ့အကြည့် နှစ်သက်စွာခံယူရ တာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား။ လက်ရှိလည်း ကောင် ကလေး အသက် ၂၀ကျော်ကောင်ကလေးက ကျွန်တော့်ကိုကြည့် ခေါင်းတွေလှုပ် အပြုံးတွေတဝေေ၀နှင့်....ဟာ ဟ။
ဒီဆိုင်ကတော်တော် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ ၀န်ထမ်း အများစုနဲ့ကျွန်တော် မျက်မှန်းတန်းမိနေပြီ၊ ကျွန်တော့်အကြိုက် ကိုလည်း သူတို့သိနေကြပါပြီ။ အစပ်လျော့ရမယ်တို့ သိပ်အ ကြွပ်ကြီးအသားကို မကြော်ပေးရဘူးတို့စသဖြင့် အထာသိနေ ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့မျက်စိ ကျနေမိတဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်လေး တစ်ယောက်ကိုပဲ အော်ဒါပေးလိုက်ရင်း ကောင်တာမှာ ခဏ စောင့်နေဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ကော်ဖီပူပူ ဟော့ဒေါ့ပူပူနွေးနွေးတွေရလာတော့ ဗန်းထဲထည့်သယ်ယူရင်း ပန်းနံ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရရှိနိုင်တဲ့ အပြင်ဘက်က ခုံတွေ ဘက် check လိုက်တော့ ခုံတွေက နေရာအပြည့်။ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ အပိုင်စီးထားလိုက်ကြတာများ။
ဟူး....သက်ပြင်းအသာချရင်း ဆိုင်အတွင်းဘက်ပြန်ပြီးဦးတည် မိစဉ်မတော့ ချစ်စရာကောင်လေးတွေစီက အသံပြုခေါ်သံကြား လိုက်ရ တယ်။ အပြုံးချိုချိုနဲ့ကောင်လေးက သူတို့ခုံမှာ အတူ ထိုင်စားလို့ရကြောင်း ဖိတ်ခေါ်တော့ ဘယ်နေမလဲ အပြုံးတစ် ပွင့်ပြန်ပေးလိုက်ရင်း ကျေးဇူးတင်စကားဆိုကာ ခုံမှာဝင်ထိုင် လိုက်ရတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လူအုပ်ကြီးရဲ့ အကြောင်း၊ ရာသီဥတု၊ြ့ပီးတော့ တစ်ခြား အကြောင်းလေးတွေပြောမိကြ ရင်း အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တစ်ခုကို လက်စသပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နာမည် တစ်ယောက်အပြန် အလှန်နာမည်ပြော မိတ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်က ဇေယျာ၊ သူတို့က ကျော်ကျော်နဲ့ မြင့်မြတ်တို့ပါတဲ့။
အရသာခါးဆိမ့်ဆိမ့်ပေးစွမ်းတဲ့ ကော်ဖီခွက်ထဲက ကော်ဖီကို တစ်ငုံသောက်လိုက်ရင်း သူတို့အကြောင်း စပ်စုလိုက်တော့ တယ်။ 'ဒါဆို မင်းတို့နှစ်ယောက်အတူနေကြတာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲကွ' သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်နေကြရင်း ဘယ်လိုပြောရမလည်းစဉ်းစားနေကြတယ်။
'ကိုယ်ဆိုလိုတာကကွာ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် သိအောင် ကြိုးစားကြ၊ ဂရုစိုက်ကြ၊ အတူတူ တစ်ခန်းထဲနေကြ တာမျိုးလေ'
ဒီတော့မှ သူတို့အပြုံးကိုယ်စီ ဆင်မြန်းကြရင်း သူတို့ ဒိတ်တာ ကတော့ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ၊ အထက်တန်းကျောင်းပြီးက တည်းက၊ ပြီးတော့ကောလိပ်ကို အတူတူသွားဖို့ အစီအစဉ် ဆွဲနေသတဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ပါတနာတို့ အကြောင်း ပြောပြရတာပေါ့။ အတူတွဲ လာတာ ၁၅နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်း.....ကောင်ကလေးတွေ ခမျာ "Wow!" ပေါ့။
အားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို မေးမြန်းဖြစ်ကြ ဆွေးနွေး ဖြစ်ကြတာက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အချစ်နှင့် လိင်ကိစ္စ အပါအ၀င်ပေါ့လေ။ သူတို့က ကျွန်တော့်ပါတနာ အခုဘယ်မှာ လည်းတဲ့။ အလကားငကြွားလို့ထင်မှာတော့ ကျွန်တော်စိုး ရိမ်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ပါတနာ သို့မဟုတ် ရည်းစားမရှိဘဲ ရှိသ ယောင် တချို့ကပြောတတ်လွန်းလို့လေ။ သူတို့မေးခွန်းကို စက္ကန့်မဆိုင်းပါဘူး 'ကိုယ့်ပါတနာက စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ မကြာ ခဏခရီးထွက်ရတတ်တယ်ကွ၊ အခုသူ စင်ကာပူကိုသွားနေ တယ်' လို့ရှင်းပြပြောပြလိုက်တာပေါ့။
သူတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်လိုက် ကြရင်း ပြုံးစိစိမျက်နှာပေးတွေ ဖြစ်မိသွားရင်း ကျွန်တော်တို့တွေ အတူတကွ ရယ်မောဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ ကျွန် တော့်နားတိုးကပ်လိုက်ကြပြီး 'ညီတို့ အဲဒီကိစ္စကို ကူညီပေး နိုင်မယ် လို့ထင်တယ်ဗျ'
သူတို့ခေါင်းလေးတွေ ပြိုင်တူလှုပ်ရှားသွားရင်း အငယ်လေးက 'ကျွန်တော်တို့ three-way လုပ်ချင်နေတာဗျ ပြီးတော့ အစ်ကို့ လှုပ်ရှား မှုရယ် ဖီလင်ဘယ်လိုခံစားတယ်ဆိုတာရယ်ကိုလည်း သိချင်နေကြတာ'
မျက်လုံးများတောင်ပြူးချင်ချင် ဖြစ်သွားမိပါတယ်။ များသော အားဖြင့် သက်တူရွယ်တူတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတဲ့ အရွယ်လေး တွေက ကျွန်တော့်လို ၃၀ကျော်ကို စိတ်ဝင်စား တယ်ဆိုတော့လေ။ အတွေ့အကြုံဖလှယ်ချင်ကြဟန်တူပါရဲ့။ စားသောက်တဲ့ကိစ္စတွေ ပြီးဆုံး စကားတွေလည်းပြောလို့ ၀ ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အိမ်ကိုသွားသင့်ကြောင်း သဘော ညီကြပြီး ကောင်တာက ပါဆယ်ကို အိမ် အပြန်အတွက်သွားယူ ငွေရှင်းကာ ကားဆီလှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Mountain စက်ဘီးတွေကို ကားနောက်ခန်းကိုထည့်ပြီးပိတ် ကားကိုအသာ လှိမ့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကားပေါ်မှာ ကောင်လေးတွေ အငြိမ်ကိုမနေဘူး စကားပြေ လိုက် လမ်းဘေးက သွားလာနေတဲ့ ကောင်လေးကောင်မလေး တွေကိုကြည့်ပြီး ဝေဖန်လိုက်နဲ့ တွတ်ထိုးနေတာများ ကျွန်တော့် ကို ငယ်မူပြန်သွားစေသလိုပင်။ အခုချိန်တော့ သူတို့လိုနေထိုင် ဖို့ မသင့်တော်တော့ဘူး မဟုတ်လား။
'ဟာဗျာ အစ်ကိုကြီးကလည်း....ဒါတွေ ကားပေါ်ထားစရာ လားဗျ၊ ပြီးတော့ ရောင်စုံ'
ဒက်ရ်ှဘုတ်ထဲက မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကိုပဲ မြင်ပြီးလှမ်းယူဖို့အဆွဲမှာ ကွန်ဒုံးရောင်စုံလေးတွေထွက်ကျလာတာလေ။ စတိုးဆိုင်တွေ စူပါမားကတ်တွေရောက်တိုင်း တံဆိပ်မျိုးစုံက ထုတ်တဲ့ ကွန်ဒုံး အရောင်စုံလေးတွေကိုတွေ့ရင် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ၀ယ်ထား ပြီး ထည့်ထည့်ထားဖြစ်လို့ရှိနေတာ။
လမ်းအတိုင်းမောင်းချလာပြီး မြို့တွင်းရောက်လာတော့ စတိုး ဆိုင်နား ခဏရပ်ရင်း သုံးယောက်သားဆိုင်တွင်း ၀င်ခဲ့ပြန်ပေါ့ တစ်ခါ။ အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ ကျော်ကျော်ဆိုတဲ့ ကောင် ကလေးက ဇီဇာနည်းနည်းကြောင်သလေ သူသုံးနေကျ ကွန်ဒုံး ကိုပဲ သုံးချင်သတဲ့။ ကွန်ဒုံးကောင်တာကိုမရောက်ခင် မြင့်မြတ် ကို မျက်စိမှိတ်ပြလိုက်ရင်း 'ပုံမှန်ဆိုဒ်ပဲ ယူကြမယ်နော် ဒါမှ မဟုတ် XL ဆိုဒ်များလိုမလား'ဆို လိုက်တော့ ကောင်လေးတွေ သဘောကျပြီး ရယ်မောကြပါတော့တယ်။ ပုံမှန်ဆိုဒ် ကွန်ဒုံး နှစ်ထုပ်ရယ် ခပ်ကြီးကြီး Lube ပုလင်းတစ်လုံး ရယ်ယူလာပြီး ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းတော့ ကောင်တာစာရေးခမျာ ယူမည့် ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက် ကျွန်တော်တို့ကို မျက်တောင်ပင့် ကြည့်လိုက်နဲ့ စူးစမ်းနေသေးတယ်။ အဲဒီတော့မှ သတိပြုမိကြ ရင်း စာသင်ခန်းရှေ့ထွက်ရပ်ရတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေလို ပါးပြင်မှာ နီရဲလို့ပေါ့။ ပိုက်ဆံကို သွက်သွက်ရှင်းပြီး ကားဆီ အသော့နှင်လာကြပါတော့တယ်။
မြို့ရဲ့ အတွင်းပိုင်း ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ကိုမရောက် ခင် သစ်တောလမ်းသွယ်နားအရောက် ကျော်ကျော်က ဘာတွေ များဖြစ် သလည်းမသိ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကို အနမ်းတစ်ပွင့်လှမ်း ချွေသလို မြင့်မြတ်ကလည်း သူ့လက်ဖ၀ါးလေးတွေနဲ့ ကျွန် တော့်တီရှပ်အောက် လက်လျှိုလိုက်ရင်း ရင်အုပ်၊ ဘယ်လီ၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်လေရဲ့ ညင်ညင်သာသာပေါ့။
ကျွန်တော့်အိမ်ကိုရောက်တော့ သူတို့လေးတွေ မျက်လုံးမှာ အံ့သြသဘောကျတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ မြင်နေရတယ်။ ခြံဝန်းထဲမှာ ပန်းခင်းတွေ၊ တိုင်ကပ်နှင်းဆီနီတွေ၊ သစ်ခွတွေ၊ စပယ်ရုံတွေကို အဆင်အပြင်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးထား တာမို့ပေါ့။ ခြံဝကနေ တမေ့ တမော လမ်းလျှောက်လာရင်း အိမ် ကိုမြင်ချိန်မှာတော့ ကျော်ကျော့်ပါးစပ် ၀လုံးဖြစ်သွားပြန်တယ်။ တိုက်လေးက ကျွန်တော့်သူငယ် ချင်း အင်ဂျီနီယာနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆောက်ထားတာ၊ တစ်ထပ်ခွဲတိုက်လေးပေါ့။ သဘာဝအလင်း ရောင်များများရအောင် ၊ လေကောင်းလေသန့် ရအောင် အထူး ပြင်ဆင်ထားတာ၊ တတ်နိုင်သမျှ စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့ သဘော လည်းပါသပေါ့။ လသာတဲ့ညများမှာဆို အိမ်အပေါ်ထပ် မှန်ချပ် တွေကတစ်ဆင့် လရောင်ဖြာကျနေတာကို ငေးမောနိုင်ပါတယ်။ လေပြေလေးအနှော့မှာ ပန်းနံ့မျိုးစုံကိုလည်း ရှူရှိုက်ရတာပေါ့ ဗျာ။
'အင်း...အဲဒီတစ်ခုတော့ ချွေတာဖို့မေ့သွားတယ်၊ ကိုယ်ကရုပ်ရှင် ၀ါသနာအိုးဆိုတော့'
ကောင်ကလေးတွေ လာရင်းကိစ္စမေ့ကုန်ပြီထင်ပါတယ်။ သူတို့ စားဖို့ မုန့်နဲ့ ကုတ်ဘူးတွေ စားပွဲပေါ်ချ၊ တီရှပ်ကို အသာချွတ် ရင်း ဆိုဖာပေါ် ကျွန်တော်ထိုင်တော့မှ သတိပြန်ဝင်လာပြီး သူတို့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က အင်္ကျီတွေကို ချွတ် ပြီးတော့ ကစားပွဲဝင်ဖို့ ပြင် ဆင်ကြ တော့တာ။ အပေါ်အင်္ကျီ တဖြည်းဖြည်းကွာသွားချိန် လက်မောင်းသားလေးတွေ၊ မို့နေတဲ့ရင်အုပ်၊ အဆီမရှိတဲ့ ဘယ် လီ တကယ့်ကိုဟော့တ်တဲ့ Swimmer's body ပိုင်ရှင်လေးတွေ ပါပဲ။ အားကျမခံ ကျွန်တော်လည်း အောက်ခံစွပ်ကျယ်ကို အ သာချွတ် ချည်ထည်ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံး ခြင်း ဖြုတ်ရင်း ဆိုဖာလက်ရန်းပေါ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ခြေ ထောက်ကရှူးကို ချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပေါ်မှာ Jock-strap လေးရယ် ပြီးတော့ တွန်းထိုးရုန်းကန် နေတဲ့ ညီဘွားရယ်ဟာ သိသိသာသာ ပေါ်လွင်နေရသပေါ့ သူ တို့မြင်ကွင်းထဲမှာ။
'အစ်ကို အသက်သုံးဆယ်ကျော်ဆိုတာ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့ လားဗျာ ၂၅ ဒါမှမဟုတ် ၂၈နှစ်လောက်လို့ပဲထင်တယ်'
ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကျေနပ်ပြုံး ပြုံးမိရရင်း သူတို့ကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပါတော့တယ်။ ခုတင်ပေါ်မှာ အတူတကွ လှဲလျောင်းရင်း ဟိုကိုင် သည်ပွတ် body touching လုပ်ကြ လေသတည်းပေါ့ဗျ။ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့် Jock-strap ကိုအသာ ဆွဲချွတ်ပေးနေချိန်မှာ မြင့်မြတ်က သူ့ဘောင်းဘီကို အသာချွတ်တယ်။ Rocket တွေကြီးပါပဲလား။ အငယ်လေး မြင့်မြတ်က ၆လက်မ၀န်း ကျင်ရှည်ပြီး အနည်းငယ်တုတ်သလို ကျော်ကျော်ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ ဒါပေမဲ့သူက ပိုပြီးတုတ်တယ်။
ဒီနေ့ ဖိုးကံကောင်းကျွန်တော်လေ...ငယ်ရွယ်နုပျိုတယ်၊ ကြံ့ခိုင် တဲ့ ဘော်ဒီပိုင်ရှင်လေးတွေနဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ကစားနေရတာ ပြီးတော့ သူတို့တွေက ကျွန်တော့်ကို အမှန်တကယ် လိုလားနှစ် သက်နေတာတွေကြောင့်။ မကြာခင် အရှိန်မြှင့်တင်တော့မယ့် ကစားပွဲလေး အစပျိုး နေပါပြီ။ အိပ်ယာပေါ်က စောင်ထူထူကို ဘေးပို့လိုက်တယ်။ Dim light ကိုဖွင့် တခြားမီးတွေကိုပိတ် မှန်ပြတင်းက လိုက်ကာတွေကို အသာချရင်းပေါ့။ သုံးယောက် သား အတူလှဲလျောင်းနေကြရင်း အနမ်းဒီဂရီတွေ သွေးခုန်နှုန်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြင့်တက်လာလိုက်ကြတာ ဒီအချိန်ဘယ်သူ လာတားတား ဂရုစိုက်ဖို့ သတိတောင်မရကြတော့ပါဘူး။ မြင့်မြတ်ကို ကျွန်တော် fuck လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျော်ကျော့်ကို ပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားရင် အလယ်မှာပဲနေဖို့ ကျွန်တော်တို့ သဘော ညီဖြစ်ကြတယ်။
ရုတ်တရက် မြင့်မြတ်က အိပ်ယာပေါ်ကိုအသာလှဲချလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ဘော်ဒီကိုဆွဲဖက်တာ.....သူ့ကိုကြည့်ရတာ ပက် လက်လှဲအိပ် ရတဲ့ အနေအထားကိုကြိုက်ပုံပါပဲ။ ကောင်းသ ပေါ့လေ သူ့မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်မြင်ရသလို ကျွန်တော့် လောင်ချာကြီးသူ့ ထဲဝင် ထွက်တာကို သူမြင်နိုင်တယ်မ ဟုတ်လား။
ကျော်ကျော်က ကွန်ဒုံးကိုဖောက် ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာစွပ် ပေးသလို Lube အနည်းငယ်ယူကာ မြင့်မြတ်လေးရဲ့ ခရေလေး ထဲ အသာ မွှေ ထည့်ပေးပုံများ အလိုက်တသိ အကျွမ်းတ၀င်။ ပေါင်လေးတွေကို အသာကားပေးရင်း လက်ချောင်းလေးနဲ့ အရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်မွှေ၊ သုံးလေးချက်အရောက်မှာတော့ တရှီးရှီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ သူ အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာ အလိုလို သိရတာပေါ့။
ကျွန်တော့် ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အသာကိုင်ပြီးတော့ သူ့ bf ရဲ့ hole ထဲအသာတေ့ပေးပြန်တဲ့ ကျော်ကျော့် ညီဘွားဟာ လည်း တဖြည်းဖြည်း မတ်လာတာ ဒုံးပျံထိပ်ဖူးအလားပါပဲ။ အသာလေး ကွမ်းသီးခေါင်းမြှုပ်ရုံထည့် ခပ်သာသာလေး သွင်း.. ..အား....ဖီးလ်ပဲ။ ကျပ်နေတဲ့ hole လေးထဲအသာချော့ သွင်း တာမှာ တဖြည်းဖြည်းနစ်ဝင်သွားရင်း ကျွန်တော့် balls တွေ သူ့ bubbly ass ကိုထိသွား တဲ့အထိဆိုပါတော့။ သုံးဦးသား အနမ်း ဖလှယ်ကြရင်း ကျွန်တော့်ခါးက စမ်းချောင်းထဲလှေလှော်သလို စတင်လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့ လိုချင်နေတဲ့ ဖီးလ် ပဲလေ။
ရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရတာက ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ စိုစွတ်မှု တစ်ခုထိတွေ့လာတာဗျ။ Lube တွေနဲ့အတူ ကျော်ကျော်ရဲ့ လက်ချောင်း တွေက လာကလိတာကိုး လတ်စသတ်တော့။ တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ လက်ချောင်းလေးတွေကို တစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်း ထည့်ပြီး အထုတ်အသွင်းသူကစားတယ်။
အ...ဘယ်လိုဖီးလ်ပါလိမ့်နော်။ မြင့်မြတ် အပေးကောင်းလို့ ကျွန်တော်လှေလှော်နေချိန်မှာ ကျော်ကျော် ကလည်း သူ့ငပဲ နဲ့လာကလိ တော့တာ အား...အ။
'ကျွန်တော့်ဟာကို သွင်းနေတုန်း အစ်ကိုလည်း သူ့ထဲကို အဆုံး ထိဆောင့်ဆောင့်ချလိုက်နော်'
အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်နဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့တင်ပါးတွေ ဖိကပ် သွားချိန်မှာ ကျော်ကျော်ရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်း ကျွန်တော့် ခရေ တွင်းထဲ တိုးဝင် လာတာကို လက်ခံရရှိလိုက်မိရပါတယ်။ ကျော် ကျော်လေ ကျွန်တော့် ပခုံးတွေ၊ လည်တိုင်တွေ၊ ဆံပင်လေးတွေ ကို အနမ်းပေးရင် ခပ်ဆပ်ဆပ် တစ်ချက်ဆောင့်ချလိုက်ကာ သူ့တာထွက်ကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ ဆောင့်ချက်တွေ...အားပါးပါး စက်သေနတ်လိုပဲ ဒါ...ဒါ သူ့ စတိုင်လ်များလား။
အိုး....ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ကစားရတာ ဒါကြောင့်ကြိုက်ကြတာ ထင်ပါရဲ့။ ခပ်မြန်မြန် စိတ်သန်သန် ပါဝင်ကစားတတ်ကြတာ ကြောင့်လေ။ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ လတ်ဆတ်တဲ့ ကိုယ်သင့်း နံ့တွေကြောင့် ပိုမို စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ကျော်ကျော် တစ် ယောက် သူ့ဆောင့်ချက် တွေကို အဆင်ပြေပြေ လက်ခံနိုင်တာ ကြောင့် သူ အံ့အားသင့်နေပုံဖြင့် ခဏတာငြိမ်သက်သွားသေး တယ်။ ပြီးမှ ဆက်လက်ပြီး အရှိန်မြှင့် တာများ ခုတင်ကြီးတောင် လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်။
သူ့ဆောင်ချပြီး အနည်းငယ်ပြန်ထုတ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်က ဖင်ကိုအသာကြွ ကျွန်တော့် တင်ပါးနဲ့ သူ့ဆီးအိမ် ဖိကပ်သွား တဲ့အထိ နောက်ပြန်တွန်းတွန်းပေးလိုက်တာ အသည်းခိုက် အောင် ကြိုက်သွားရပုံပေါ်ရဲ့ ' အား....' ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို နောက်ကနေ သိုင်း ဖက်လိုက်ရင်း အသာငြိမ်နေတယ် အဲဒီ ဖီးလ်ကို တခဏထိန်းထားခံစားဖို့အတွက်ပေါ့။ သူဘောတွေ မြှုပ်ဝင်သွားတော့မယ့်အတိုင်း ဖိကပ် ထားရင်းပေါ့။ မြင့်မြတ် ခရေတွင်းထဲ ကျွန်တော့်အားမပါဘဲ အသာမျောလိုက်နေရ တာက ဖီလင်တစ်မျိုးဗျ။ မြင့်မြတ် ခရေတွင်းထဲ အဆုံးထိ ဆောင့်သွင်းရင်းနှဲ့နေတာကို ကျော်ကျော်က နောက်ကအသာ ဆောင့်ရင်း ကြည့်ကာ 'အိုကေ...ဆက်လုပ်....သူ့ကို လုပ်ဗျာ အားရပါးရ okay 'တဲ့။
အိုး...ဘာရမလည်း လာထားပေါ့။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပြုစုမိ တာနေတာမှ ကျော်ကျော် လူလည်ကျလာတယ်လေ လှုပ်ရှား မှုသိပ် မလုပ်တော့ဘဲ ငြိမ်သက်နေတာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော် မြင့်မြတ် hole ထဲ သွင်းပြီးဆောင့်လိုက် ပြန်ချွတ်လိုက်လုပ် တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်က မြင့်မြတ် hole က ချွတ်ပြီး တင်ပါးကိုကြွလိုက်တာနဲ့ သူ့ဒစ်ကကျွန်တော့် ထဲဝင်ပြီလေ။ သူ့ဆောင့်စရာမလို အားစိုက် စရာနည်းပါးသပေါ့။ အား.... ဘယ်တုန်းကနဲ့မှမတူတဲ့ ဖီလင်ကိုခံစားရတာများ တိမ်တွေ ထဲမှာ မျောနေသလို ရေလွှာပြင်ပေါ် ပေါလောပေါ် နေသလိုမျိုး လေ။ မြင့်မြတ်ကလည်း အောက်ကနေ ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူ မျက်ဖြူများပင်လန်နေသယောင် လုပ်နေသေးတော့တာ ပါးစပ် က 'အား...အ..အ.ရှီး' တဲ့ it was awesome.
ခဏအကြာမှာတော့ ကျော်ကျော်ရဲ့ငပဲက ပိုပြီးကြီးထွားလာ သလို ခံစားရကာ သူအလိုက်သင့်မငြိမ်တော့ဘဲ ဆောင့်ချက် တွေကလည်း မြန်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အလိုက် တသိ ဖင်ကိုရှုံ့ပွ ရှုံ့ပွလုပ်ရင်း ညှစ်ပေးပြုပေးလိုက်တာမှာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုဆွဲ ဖက်ကာ ' Oh man, yeah...I'm Cumming. Feel it hot and deep inside ya" ဆိုပြီးတော့ ကာ ကျော်ကျော်ရဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ခါးဟာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ် သွားကာ သူ့ညီဘွားက နို့ဖြူတွေ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ဖြည့်ပေး တော့တာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အဖြစ်ကို ကြည့် ရင်း ရွှေပြွန်ချောင်းက ရေတွေ မြင့်မြတ်ခရေတွင်းထဲ ဖိကပ်ပြီး ပန်းထုတ် ပစ်လိုက်တာ.......so good.
ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဆွဲထုတ်လိုက်ကြပြီး ရေနဲ့ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ခဏအနားယူဖြစ်ကြတာပေါ့။ ခဏလေးကြာတော့ အိပ်ယာပေါ် အသာ လှဲရင်း မြင့်မြတ်ရဲ့ပေါင်ကြားကို မျက်စိအရောက်မှာ မိုး ပေါ်ကို ဒုံးပျံနှင့်ချိန်နေဆဲ မြင်လိုက်ရတော့ သူ climax မဖြစ် သေးဘူးဆို တာသိ လိုက်ရတယ်။ ကောင်ကလေးပြောဖို့လည်း ရှက်ရွှံ့အားနာနေဟန်တူပါရဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ပြုံးမိရပြီး 'ခဏလေးနားပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုမင်းအတွက် အပိုင်ပေး မယ်...မင်းစိတ်ကြိုက်....အိုကေလား' လို့ရဲဆေးတင်ပေး လိုက်တော့မှ လှုပ်ရှားလာတာများ လန့်တောင်လန့် တယ် ခုန်ထပြီး ကျော်ကျော့်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးပြီးအိပ်နေတဲ့ ကျွန် တော့်ဆီကိုလှမ်းလာတာကိုး။
ဟိုး.....သူလေးကတစ်မျိုး။ လူအမျိုးမျိုး မူဟန်အမျိုးမျိုး အ ကြိုက်အမျိုးမျိုးဆိုတာ တစ်ကယ်မှန်တယ်။ ကျွန်တော့်တစ် ကိုယ်လုံးကို အသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း ရှုစားနေတာ အ တော်ကြာသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘေးစောင်းအိပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို မှောက်လျက် ခပ်ကုန်းကုန်းအနေ အထားဖြစ် အောင် ပြုပြင်ပေးပြီးမှ ဒူးထောက်အနေအထားဖြင့် သူ့ငပဲကို တွင်းဝတွင်တေ့လျက် နှဲ့သွင်းသွင်း လေသည်။
'အစ်ကို...အ..အ ကောင်းတယ်ဗျာ...အားအ' ကျွန်တော့်ခါးအား အသာမစေလျက် ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားဖြစ်အောင် မြင့်မြတ် ကပြင်ဆင်ပေးချိန်မှာ ကျော်ကျော်က နှစ်ဥိးလုံးရဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ Lube များလိမ်းကျံပေးထားတာကြောင့် မြင့်မြတ် လည်း သူ့စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်နိုင် ကျွန်တော်ကလည်း ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျော်ကျော့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ ကလိ ပေးနိုင်တာပေါ့ဗျ။
မြင့်မြတ်က သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အထုတ်အသွင်း ရှန်တိန် လုပ်ကြည့်ရင်း တစ်ချက်မှာတော့ အဆုံးထိဖိကပ်သွင်းလိုက် တာ..... ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ ဖီးလ်က တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းထတဲ့အထိ ပျံ့နှံ့သွားရပါတယ်။ မြင့်မြတ် ကတစ်မျိုး ကျော်ကျော့်လို စက်သေနတ်မပစ်ဘဲ မွှေနေလိုက် ခပ်ဖြည်းဖြည်း အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်နဲ့ ချက်ကျကျ စည်း ချက်နဲ့ မောင် လုပ်တာပလေ။ မြင့်မြတ်က နောက်ကဆောင့် ရင်း ကျွန်တော့်နို့ကို လှမ်းကလိသလို တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော့် ငပဲကို လက်ကစားပေးပြန်တာ။ ထို့အတူ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျော်ကျော့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ကလိပေးရင် ခပ်မာ မာလေးဖြစ်လာတဲ့ သူ့ညီဘွားကို ကျွန်တော် အသာဆွဲကိုင်ရင်း လက်ကစားပေးလိုက်တာများ လက်ထဲပြည့်နေတာပဲ။
အသက်ရှူသံတွေ ခပ်ပြင်းပြင်းထွက်လာသလို တင်ပါးနဲ့ ဆီးစပ် ရိုက်ခတ်သံ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moan ဖြစ်သံတွေဟာ မော်ဒန်ရော့ခ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကျော်ကျော် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာ အသာတေ့လိုက် ရင်း 'အ...အ'ဆိုတဲ့ အသံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ ပန်း ထုတ်လိုက်တာ နွေးကနဲ နွေးကနဲ သူ့သုတ်သွေးတွေ။ ဇကော ၀ိုင်း၊ လှေလှော်၊ ကျားကြီးရေသောက်တို့နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မြင့်မြတ်ခမျာလည်း ကျွန်တော့်တင်ပါးရဲ့ လှုပ်ရှားဟန်၊ မြည် နေတဲ့ ရိုက်ခတ်သံများကြောင့် မိနစ်သိပ်မခြားဘဲ အဆုံးထိခပ် ဆပ်ဆပ် ကော့ကော့သွင်းလိုက်ရင်း သူ့ဇာတ်လမ်း တစ်ခန်းရပ် သွားပြန်ရော။ သုံးယောက်သား ဖီးလ်တစ်မျိုးစီရယူကြရင်း ခဏ တာငြိမ်သက်သွားကြတာ သုံးလေးမိနစ်မက။
အတန်ကြာ ငြိမ်သက်သွားကြပြီး ခဏအကြာမှာတော့ သုံး ယောက်သား ရေချိုးခန်းထဲဝင် ကိုယ်ခန္ဓာကို သန့်စင်ရေမိုး ချိုးကြလေ သတည်း ပေါ့။ တဘက်လေးတွေ ကိုယ်စီပတ်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာကြတာ တာဇံဇာတ်ကားထဲက မင်း သားတွေအတိုင်းပဲ...ဟာ...ဟ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းအပြင်အဆင်ကို ရော၊ ပြူတင်းပေါက်က လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ပန်းခြံထဲက ပန်းတွေကိုရော အမှန်တကယ် သဘောကျနေကြပါတယ် တကြည့်ကြည့်နဲ့လေ။
သုံးယောက်သား လူးလှိမ့်လို့ရတဲ့ ကုတင်ကြီးပေါ်လှဲလျောင်ကြ ရင်း ၂နာရီနီးပါး အိပ်ပျော်သွားမိတဲ့ ကျွန်တော် ကျော်ကျော်နဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ နှိုးဆွမှုကြောင့် လန့်နိုးလာရပါတယ်။ သူတို့ ကျွန် တော့် ညီဘွားကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်လိုက်၊ ရေခဲမုန့်ကို လျှာနဲ့လျှက်သလို ကစား လိုက်နဲ့ အတော်ဟန်နေကြတာဗျ။ 'ဘယ်လောက် ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ နိုးထရမှုလည်း'ဆိုတာ။ သူတို့ပခုံးတွေပေါ် လက်တင်ထား ရင်း အပြုံးတွေများများ သူတို့ကိုပေးရတော့တာပေါ့။
ရေချိုးခန်းထဲ ပြန်ဝင်ကြ အ၀အတ်အစားလဲလှယ်ကြပြီးတဲ့နော် မှာတော့ အချင်းချင်းရဲ့ လိပ်စာကဒ်တွေ၊ Info တွေလဲပေးကြ မေးကြ ပြောကြပြီးနောက် သူတို့တိုက်ခန်းကို လိုက်ပို့ချထားပေး ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တိုက်ခန်းဟာ ကျွန်တော့်အိမ်ကနေ မိုင်ဝက် လောက် ဝေးအောင် ကားမောင်းရမှန်းသတိပြုမိပါသေးတယ်။ သူတို့က တိရစ္ဆာန်ချစ်တတ်ပုံပေါ်ရဲ့ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ ကိုအပြေး လာကြိုကြတဲ့ ခွေးလေးတွေက တစ်ကောင်မကပါ ဘူး။
ပြက္ခဒိန်က စာရွက်အချို့ပြုတ်ကျအပြီးမှာတော့ ကျွန်တော့် ပါတနာ ချစ်ချစ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတွေအကြောင်းပြောပြ၊ သူတို့နှင့် မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပေးလိုက်တာ တစ်ညလုံး နှုတ်ဆက်တွေ့ ဆုံပွဲကြီးဖြစ်သွားရပါရော လေ.....ဟဲ...ဟဲ။ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာကြပြီး အပြင်သွားတာ ခရီးထွက်တာတွေမှာ စုံတွဲနှစ်တွဲအတူပေါ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြ ဆိုကြ အတော်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းပါ တယ်။ တစ်ခါတစ်လေများ foursome လုပ်ဖြစ်ကြ သေးတော့တာ။
ကျွန်တော်တို့ အတူမဆုံဖြစ်ကြရင်တောင် တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ မြို့ပြင်နားက ကဖီးမှာ ကော်ဖီပူပူလေးရယ်၊ Donut လတ်လတ် ဆတ် ဆတ်တွေရယ် ထင်းရှူးနံ့ သင်းသင်း လေညှင်းတသွဲ့သွဲ့ နှင့် မနက်ခင်းတစ်ခုတစ်လေကို အဆုံးသတ်ဖြစ်ကြသေးတာပါ။
'ဟူး....ကော်ဖီကလည်းကောင်း...၊ Donut ကလည်း လတ် ဆတ်လိုက်တာ...Taste is good.'
Note: လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလေးနှစ်ကရေးဖြစ်ခဲ့တာစာကို April လအတွက် အထူးပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။ စာအသစ်မရေးဖြစ်ပေ မဲ့ အဟောင်းလေးကလည်း ကောင်းမှာပါ။